Izinzuzo ezi-6 zokuphuza amanzi kalamula nsuku zonke | Bezzia
Izinzuzo ezi-6 zokuphuza amanzi kalamula nsuku zonke
UToñy Torres | | Amathiphu ezempilo
Ngabe uyazi zonke izinzuzo zokuphuza amanzi kalamula nsuku zonke? Kungumkhuba ojwayelekile kakhulu, yize abantu abaningi bengazazi zonke izimfanelo zalolu hlobo lukalamonade wasekuseni. Ngokuyinhloko imayelana ikhambi elilula lemvelo lokuthuthukisa impilo ngayo yonke indlela.
Ngoba amanzi kalamula, lapho ethathwa esiswini esingenalutho nsuku zonke, asebenza njenge-tonic, i-vitamin complex kanye nomvikeli womzimba emisebenzini eminingi. Cishe uke wakuzwa lokho ukuphuza amanzi afudumele anelamula ekuseni kukusiza wehlise isisindo. Futhi impela, lokho kungenye yezinzuzo zalesi siphuzo, kepha hhayi kuphela noma okubaluleke kakhulu.
1 Ukuphuza kanjani amanzi kalamula kungayithuthukisa kanjani impilo yakho
2 Ungaphuza kanjani amanzi kalamula
Ukuphuza kanjani amanzi kalamula kungayithuthukisa kanjani impilo yakho
Ulamula uqobo lwalo isithelo esinezinto ezinhle zokudla okunempilo. Ngaphezu kukavithamini C, obaluleke kakhulu empilweni, ulamula uqukethe ama-acid amaningi, njenge-citric acid. Le nto ikhuthaza ukugcwala amathe, inqubo ebalulekile ezintweni ezinjengokugaya ukudla, ukukhuluma, ukugwinya noma ukuhlafuna, phakathi kwabanye. Ngakolunye uhlangothi, leyo citric acid isebenza kangcono ekuqedeni ukoma kunamanzi, ngakho-ke baba yisiphuzo esihle kakhulu.
Izinzuzo zokuphuza amanzi kalamula njalo ekuseni Kuningi, kepha ngalezi zingabokuqala ozozibona uma usuzenzile izinsuku ezimbalwa.
Qinisa amasosha omzimba: Ilamula linothe ngo-vitamin C futhi lisiza ukuthuthukisa ukuzivikela kuma-virus anjengomkhuhlane nemikhuhlane yonyaka. Ngaphezu kwalokho, le vithamini ibalulekile ukuze umzimba ukwazi nciphisa kahle insimbi kokudla okudliwayo.
Kuvimbela amatshe ezinso: Amatshe avela ngenxa yokuqoqwa kwensimbi ezinso. Lokhu yilokho okwaziwa ngokuba namatshe ezinso, inkinga ebuhlungu kakhulu engagwemeka ngokudla kahle amanzi. Phuza amanzi kalamula usuku ngalunye kungasiza ukuqeda amatshe, ngento ethile kulamula ebizwa nge-citrate, okuvame ukusetshenziswa emithini yokwelapha le nkinga yezinso.
Isiza ukulinganisa umzimba: Ukweqisa ngokweqile emzimbeni kungadala izifo ezinkulu ezifana ne-Alzheimer's, isifo sikashukela, ukukhuluphala ngokweqile noma umdlavuza, phakathi kokunye. Amanzi kalamula isiphuzo esine-alikhali, okusho ukuthi kuyasiza nciphisa i-asidi yomzimba, ukuthola i-pH eyiyo.
Kuyisiphuzo esihlanzayo: Amanzi kalamula ukuzeIsiza ukuqeda ubuthi obunqwabelanayo emzimbeni. Lawa ma-toxin anobuthi amangqamuzana, izicubu nezitho, okubangela ukugula okungathi sína. Ukuqeda labo buthi usuku nosuku kungenye yezindlela zokusiza umzimba ukuthi uhlale uphilile.
Lawula ukucindezeleka nokukhathazekaUkuphuza amanzi kalamula nsuku zonke kuyindlela enhle yokuvikela impilo yobuchopho. Lokhu kungenxa yokuthi iqukethe i-magnesium ne-potassium, amaminerali amabili akusiza ukuphatha ukucindezeleka, ukukhathazeka nempilo yezinzwa.
Yehlisa ukuvuvukala: Ukuvuvukala kungadala izifo eziningi ngakho-ke kubaluleke kakhulu ukudla ukudla nakho umphumela wokulwa nokuvuvukala njengamanzi kalamula. Le nhlanganisela isiza ukuqeda i-uric acid enqwabelana emzimbeni, into ebangela ukuvuvukala.
Ungaphuza kanjani amanzi kalamula
Manje njengoba wazi ezinye zezinzuzo ezibaluleke kakhulu zokuphuza amanzi kalamula nsuku zonke, sekuyisikhathi sokuthola ukuthi kufanele uwathathe kanjani ngendlela efanele. Yize lesi siphuzo singenakho ukuphikisana, abantu abahlushwa ubuthakathaka bamazinyo nezinye izinkinga kufanele babonane nodokotela wabo kuqala. Uma okudingayo kuyikhambi lemvelo lokuthuthukisa impilo yakho ngokujwayelekile, yile ndlela okufanele ulungiselele futhi uphuze ngayo lesi siphuzo.
Kumele ukhiphe ujusi wengxenye yelamula noma uma ukhetha ucezu lonke. Hlanganisa namanzi wemvelo, akudingeki ukuthi ushise, kepha akufanele kubande kusuka esiqandisini. Phuza la manzi kalamula njalo ekuseni esiswini esingenalutho, isikhashana ngaphambi kokudla ibhulakufesi lakho ngokujwayelekile. Uma unamazinyo azwelayo ungaphuza amanzi kalamula ngotshani bese ugeza ngamanzi ngemuva kwalokho.
Ngalesi senzo esilula nsuku zonke, ungathuthukisa impilo yakho ngayo yonke indlela. Ngaphezu kwalokho, uzothola amandla angeziwe nsuku zonke, uzoba nokuphefumula okusha, uzokwazi ukunciphisa isisindo kalula futhi okubaluleke kakhulu, uzozizwa unamandla futhi unempilo.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ezempilo » Amathiphu ezempilo » Izinzuzo ezi-6 zokuphuza amanzi kalamula nsuku zonke
Izindlela zokuthi umbhangqwana usebenze
Qeqesha ngaphandle ngalezi zivivinyo ze-TRX